Nivoaka tamin’ ny asa fanaraha-masony “exit pol” : Saikaniarahan’ nyhatezerem-bahoaka -
AccueilRaharaham-pirenenaNivoaka tamin’ ny asa fanaraha-masony “exit pol” : Saikaniarahan’ nyhatezerem-bahoaka
Nanambara tamin’ ny fomba ofisialy ny alatsinainy lasa teo ny fanatanterahan’ny fikambanana AFRIC (Association for free research and international cooperation) miaraka amin’ ny mpiara miombon-antoka aminy CIS-EMO (commonwealth of independent states-Election monitoring organization), ny fanatanteran’izy ireo fanotanianany latsa-baton’ nataon’ny mpifidy avy mandatsabato. Raha ny fanazavana nomen’ izy ireo dia nisy nyhalalana izaynomen’ ny Ceni azy ireo, hafa hany manao izay asa izay satriavoalohany eto Madagasikara io tetik’asa “exit pol” io. Ny marainan’ny alarobia kosa anefa dia nisy ny olana satria tsy nankasitrahan’ny mpifidy ny fametrahana ny fanotanianana mipetraka mikasika ny safidin’ izyireo, tahaka ny tany Farafangana dia saika niarahan’ny hatezeram-bahoaka ireo mpanatan-teraka ny fanadiadiana. Voatery niantsony lehiben’ ny distrika mihintsy aza ireo mponina, ary nampitsahatra avy hatrany ny asan’ireo mpanadiady. Tsy tany farafangana ihany fa nisy izany tranga sahala amin ‘io koa teny Ivato sy ny teny Andavamamba, zay niarahan’ny hatezeran’ ny mpifidy iray ireo fiarahamonim-pirenenaireo. Torak’izany ihany koa tany Toamasina. Vao nisokatra ny birao fandatsaham-bato tao amin’ny Epp Todivelona Raphael, dia raikitra ny savorovoro. Vehivavy miisa efatra iraka nanao fitsapan-kevitra ihany koa no nosavoritahan’ny mpifidy. Niditra an-tsehatra tamin’izany ny mpitandro filaminana niaro ny ain’izy efa-bavy. Voalaza tamin’ny fanadihadiana natao azy ireo fa teratany vahiny no lehiben’izy ireo. Mazava ny fanazavana izay nomen’ny ceni tamin’ ny halalan’i Fano Rakotondrazaka, fa “nahazo halalana tamin’ ny ceniny “exit-pol”, hanatanteraka fanarahamaso. Efa in-droamiantona ny fivoriana niarahana tamin’ izy ireo, ary nolavina kosany fanatanterahan’izy ireo fanadiadiana. Noho izany rahambola manohy izany fanotaniana izany ireo avy amin’ ny “exit-pol”, dia miantso ny
tompon’andraikitra sy ny mpifidy izahay iantso avy hatrany ny mpitandron’ny filaminana” hoy izy. Na dia izany aza tsy nikasana ny fizotry ny fifidianana tao amin’ireo biraom-pifidianana nisy savorovo ny zava-nitranga.
IratraRaitra, Valérie R.